Ploskireva isangoma (ngemuva kwalokhu ozobizwa namanje Bacto agar F) kuyinto medium izakhi ukutshala nezilwanyana ezincane ezithile, ngokuyinhloko Shigella futhi Salmonella. Njengoba umthombo ukusetshenziswa izinto zakhe itheleleke: umchamo, Bile, ngemva kwalokho angene endleni.
Nikolay Ivanovich Ploskirev - Isazi samagciwane kweSoviet futhi udokotela Ezigcwalisiwe. Wazalwa ngo-1869 futhi wafa ngo-1948, wasebenza kakhulu ekuphileni kwakhe emzini wakubo - saseTomsk.
Ngo-1888, lapho, usosayensi esizayo, ngaphandle kokuqeda lesithupha esikoleni, wajoyina impi. wakwazi ukuqedela ukuqeqeshwa kuphela 1892, kwadlula ukuhlolwa ngoba yokwemukela Imperial saseTomsk University, wafunda e-Faculty of Medicine. Ngo 1898 wathola isihloko udokotela.
Ploskirev nengxenye neMpi Russian-Japanese, futhi ngemva kwaso ngasebenza esibhedlela saseTomsk. Ngo-1910 wamiswa njengephayona elivamile kuposi yokuba inhloko saseTomsk esibhedlela dermatological futhi Venereal, futhi iminyaka engamashumi amathathu bekulokhu ikhanda layo unomphela. Usosayensi efanayo wayengomunye wabasunguli be-umtholampilo-STI e saseTomsk.
Nikolay Ivanovich Ploskirev wabhala uchungechunge imisebenzi enikelwe empini yokulwa nezifo Venereal.
ULwesithathu Ploskireva - impahla ukutshala amagciwane emathunjini bese, ngakho-ke, kumele aqukethe izinhlobo eziningana izakhi. It ikhiqizwa ngefomu ezomile.
Shiya ingxenye enkulu yesisindo sayo Imininingwane kuyinto pancreatic sprat hydrolyzate (10.4 g / l). Kancane kancane zaba hydrocitrate sodium dibasic (8.5 g / l). Futhi kukhona ezomile izakhi umhluzi ubisi noshukela (8.62 futhi 7.3 g / l).
Isihloko sesibili Ploskireva naphakathi - J. Bacto-agar e ukwakheka ke elikhona imali agar, 6,94 g / l. Seriovatistokislogo anhydrous sodium okuqukethwe elilingana 5.1 g / l. Kukhona khona anhydrous disodium phosphate - 2.1 g / l, sodium nosawoti of cholic acid mayelana 3,46 g / l soda ash - 2.4 g
Ngaphansi igremu ezikuyo izinkomba - abomvu kokungathathi hlangothi (0.05) kanye oluhlaza brilliant (0.0002). Okuqukethwe iodine - 0.13.
Ucwaningo we izinqubo kwamakhemikhali amagciwane ifeza indima ebaluleke kakhulu izifo ezibangela anaerobic eziphilayo. Lesitshalo kulo mndeni - zamakhulu. Ziyakwazi kucishe e morphology futhi izakhiwo namasiko indlela enokwethenjelwa kakhulu uwahlukanise komunye nomunye - isifundo oyisazi samakhemikhali ezinto eziphilayo.
Lolu cwaningo iqala ngamadijithi inoculation of impahla sokugembula ku medium isiko. Yena umehluko sokugembula ngoba amagciwane coliform futhi ingxenye yalo, ngaphezu agar ethafeni, kuhlanganisa ukukhanya-lactose. Icubungula ikhono lactose - Isiboniso ezibalulekile yokuzihlukanisa kwamangqamuzana ngokwemisebenzi yawo ka enterobacteria. Uma lokhu wathola, pH usekhuluma maqondana asidi inkomba icushiwe, okuyinto uphendulela ikoloni.
Amanye amazwe angasebenzisa obunye izakhi abezindaba kodwa kuba indlela izenzo zaso sifana ezintathu ezivame kakhulu eRussia - kule ndawo Endo futhi Levine Ploskireva ngoLwesithathu.
Phesheya naphakathi Ploskireva analog kuyinto okuthiwa Macconkey Agar. Ngesimo siphelile isixazululo esobala has a ukukhanya umbala pink-yellow. Amakoloni sikwazi ukucubungula i-lactose, phakathi Ploskireva ukunikeza obomvu (cranberry) umbala. Uma amagciwane angeke ukuyicubungula, noma koloni Ayinambala noma uba nombala ababuthakathaka.
Njengoba sazi ukuthi indlela yokwakheka naphakathi kuhlanganisa izinto Ploskireva inhibitor (oluhlaza abakhaliphile Bile nosawoti, iodine), it is kuvimbela cishe ngokuphelele ukukhula izitshalo igremu-HIV, njengoba ngosuku eshehiry lokuqala kakhulu retards ukukhula, kanye nezinye evamile microflora concomitant.
Ngaphezu kwalokho kwezinhloso zenzuzo ukukhethwa wekoloni, futhi seeded ku oyinhloko isitoreji medium kanye kwamangqamuzana. Imvelo lapho kukhona seeding kufanele ibe substrates amaningi. isiko Amagcikwane kufanele ukuthola umsebenzi enzymatic ngenhlonipho kubo, ukuze medium efanayo ibekwe amashubhu ukuze kukhona amasayithi ezimbili:
eyodwa lapho agar lefanele, ungalibalekeli;
Isithakazelo sabantu abacwaningi kuleli koloni ugcwale ingxenye bevelled unhlangothi aminyene futhi ikholomu - a kwabathinta. Kulesi sigaba, medium esetshenziswa Russell, Kligler noma Olkenitskogo. Njengoba umehluko ukuxilongwa esetshenziswa futhi Ploskireva ngoLwesithathu.
Microbiology futhi pathogenic eziphilayo
Agar Ploskireva kuyisici esibalulekile uzingela izifo zibangelwa Enterobacteriaceae. Ngakho, ngokwesibonelo, Simila futhi umahluko amakoloni nezilwanyana ezincane ezibangela uhudo bacillary. Lokhu anaerobic eziphilayo okuqondene uhlobo lwe Schigella.
Njenganoma ubani ngubani ingxenye uhlobo lwama-bacterium emathunjini, shigella isimo izinduku, usayizi micrometer ezimbili. Azisona amaphilisi kanye ezinhlamvu babe flagella - ivumela okumelwe ahlukaniswe kusuka Salmonella, okuyinto, zibuye ephathekayo. Zikhula kahle kwimidiya kakhulu elula, ezingeni lokushisa kancane ngenhla ambient (35-37 ° C) futhi 7,4 pH. Ngu ubunjalo ukukhula, amakoloni musa ihluke Salmonella.
Njengoba kushiwo ngenhla, nezilwanyana ezincane kungaba umehluko kakhulu morphological Nokho, ziyahlukahluka kakhulu izinqubo kwamakhemikhali zokuphila. Ngakho, ngaphandle Shigella Nyukestl, ngaphandle kumiswa igesi acid kwenzeka ngesikhathi ukuvutshelwa carbohydrate. Ngaphandle Shigella sonnei, abakwazi lwalungabola lactose, kodwa kugaywe glucose. Vele izici zabo ukhiye, nikwazi ukuthwala kwabo lokho okusemandleni ukwehlisa niraty ukuze nitrite. amakoloni Amazwi abo ayehambisana kugaywe nge urea, kanye medium isiko kungekho liquefaction of gelatin.
Ukuqoqwa kanye nokulungisa imbewu
Ukuze sibone ama-ejenti ye uhudo, ziyadingeka ukuhlolwa microbiological eziphehliwe ezindaweni, okusho indle nesineke. Phezu kokuthola impahla, udinga ngokushesha ngangokunokwenzeka ukwenza ukuhlwanyelwa. Uma lokhu kungeke kwenzeke, umthombo kumele afakwe uyakulondoloza - phosphate sesikhashana ingxube noma glycerol. Ngezinye 4 ° C, bona zingagcinwa isikhathi esingaphezu kosuku. Qoqa impahla kumele kwenziwe esebenzisa rectal ingilazi tube okuyinto ufakwa ingemuva.
Ukuze izifundo elinama akhethiwe ubovu isikhwehlela izingcezu ukuba wageza ngemibhobho emibili kuya kwemithathu sodium isotonic chloride solution.
Isicelo namagciwane abangela izifo imvelo Ploskireva wenza ingilazi spatula. Udinga omahhadlahhadla ingxenye encane agar bayo, abese Dabula i spatula kwimvelo, kanye material asalile is akhuhlwe singene ebusweni etshaliwe. Uma zokutshala kwenziwa izinkomishi ambalwa, bese Ngamunye kubo kudingeka ukuze batshale yinhlama entsha.
Uma muco-ubovu izingcezu kukhona ngokuthwala ukuhlaziya ozinikele, akusho ukuthi akukho khona kwamagciwane. Esimweni esinjalo kubalulekile emulsify indle 10 ml i-sodium chloride (okuhlushwa 0.85%) bese sihlwanyela elilodwa noma amabili amathonsi ku konemimoya Ploskireva. esihlalweni Non-emulsified kungenziwa kutshalwe umhluzi selenitovy. Wayesebenzisa, uma, esikhundleni indle kukhona ebuhlanzweni noma nokugeza.
Imiphumela yaloku kuhlola okungenhla microbiological
Ngo esigabeni sokuqala izifundo microbiological eyenziwa ukuhlwanyelwa namagciwane abangela izifo e izinkomishi ezimbili, khona-ke ukubukela indlela yokutshala Shigella. NgoLwesithathu Ploskireva ekhiqizwa isitshalo, kanti eyesibili - emvelweni noma Endo Levin.
Ngenxa yokuthi kwakukhona zakulezi shigella kuthiwa anenkani, kuya medium kwenezelwa chloramphenicol. Khona-ke kwenzeka ezinsukwini ezingu-bayashintshana ekufukameleni i incubator at 37 ° C.
Ngosuku lwesibili ukuhlola amakoloni esekhulile. Labo angekho ku umehluko naphakathi zokuxilonga esekhulile kungekho nto enemibala emihle, kubalulekile ukuba Zikhipha medium noma okufutshane kaRussell "irowu Motley." Irhubhululo elingezelelako wenziwa olwenziwa algorithm izitshalo eyinhloko phezu kwabo. Amakoloni Shigella ngoLwesithathu Ploskireva sikhule ngendlela amakholomu esobala, kungekho nto enemibala emihle kanye nezincane. Ziyakwazi ezimbili zama:
isicaba ne imiphetho jagged;
oyindilinga, convex, nge kukhanye ezimanzi ejwayelekile.
amakoloni ezintathu noma ezine kumele mikroskopirovat Uyalinga ukuhamba. Uma kuwukuzikhohlisa alibonisi up, bona abayiswe ngoLwesithathu Olkenitskogo ukuhlukanisa isiko okumsulwa. In the ukungabikho amakoloni isici Shigella noma uma kungekho ukukhula siyenzeka nhlobo, kubalulekile ukuba Endo agar Ploskireva umkhiqizo zokutshala ka selenitovogo umhluzi. Uma amakoloni ejwayelekile zikhona inani elanele, ukubeka agglutination elilinganisiwe. A ingxube sera sonnei futhi Flexner, ukuphendula kwenzeka phezu ingilazi.
Ngosuku lwesithathu kunezinguquko ezenzeke amakoloni kwi medium zikaRussell. Uma kukhona isiko okungahambisani zilulaza lactose kanye glucose ibilisa ukukhiqiza i-acid, it is ahlukaniswe nokuhlaziwa, ukuchitha microscopy, kanye afeze ayihlwanyelayo ku "irowu Motley," kodwa kulokhu ukunwetshwa. Vele ubeke ukuphendula agglutination, ukuze ukuhlonza serological.
Ngosuku lokugcina, kumele kuphetfwe ngesisekelo izinguquko "inombolo Motley" (uma kukhona ukuvutshelwa carbohydrate), kanye esifingqa ukuphendula agglutination.
Isitoreji kanye nokulungiselela
Ulungiselela agar Ploskireva kwenzeka kanje:
55 g izidakamizwa ezomile enyakaza e ilitha lamanzi distilled.
Abilisiwe imizuzu emibili kuya kwemithathu kuze agar akuyona elicibilikile okwamanje ngokuphelele.
Thela izitsha petri (inzalo uyazikhethela) ungqimba ka 5-6 mm.
Lezi zingqimba wangasho isikhathi esiyihora nengxenye ekamelweni lokushisa (18-25 degrees). Emva kwalesi sikhathi kubuya lesifishane ngokwanele lukhuni futhi yomile.
ULwesithathu Ploskireva photosensitive kanye hygroscopic. I powder kufanele agcinwe iphakheji esivaliwe, nomswakama isihlobo egumbini akumele leqe 60%. Amazinga elikhulu for isitoreji 2 ° C kuya ku-25 ° C. Isitoreji kufanele uhambisane nale mithetho, kungenjalo kungenzeka okutholakele olungalungile.
Umqeqeshi amakilasi ngenxa travel ukhululekile kakhulu
Accelerometer efonini - kuyini? Accelerometer inzwa efonini